China One-stop bank medical service Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - Quotation - Shenzhen JAK Medical Technology Co., Ltd.
Imba > Sirivha vanachiremba Sirivha vanachiremba > Imwe-yekumira kubhengi kurapwa basa
Imwe-yekumira kubhengi kurapwa basa
Imwe-yekumira kubhengi zvekurapa sevhisi, tsigira wega-sevhisi kadhi kuburitswa, recharge, kugadzwa, kunyoreswa, kubhadhara, runyorwa kudhinda, invoice kudhinda, yekuongorora mushumo kudhinda.
Chigadzirwa chigadzirwa: JAK-800A chinzvimbo chinogadzirwa
Imwe-yekumira kubhengi kurapwa basa, inotsigira yekuzvishandira-kadhi kuburitswa, recharge, kugadzwa, kunyoreswa, kubhadhara, runyorwa kudhinda, invoice kudhinda, yekuongorora mushumo kudhinda.
JAK-800A yezvokurapa akawanda-anoshanda anozvishandira anozvishandira terminal, iyo yakazara dhizaini yakakura uye ine rupo.Canogona kuponesa zvinobudirira chipatara lobby nzvimbo, asi zvakare inogona kuchengetedza mutengo wekutenga, kuwana yakawanda-chinangwa muchina. muchina unofunga mashandiro eakaunzi kuvhura uye kuvhura kadhi, kunyoreswa, kuchengetedza, kutora nhamba, kubhadhara, rabhoritari kudhinda jira, wega ruzivo kudhinda uye kuzvipa-kwega kwega kwebasa rekurapa karenda yebhuku rekuvhara, invoice kudhinda uye wega-sevhisi chisimbiso, kubvunza uye zvichingodaro.
Junankang "Yinyitong" self-sevhisi terminal system, ichishandisa yakanyanya yepamusoro Internet yezvinhu tekinoroji, inopa zviri nyore uye zvinokurumidza masevhisi kuvarwere, inoderedza izvo zvazvino mukurumbira zvemagariro matambudziko sekuoma kwekunyoresa, kuoma kuona chiremba, mubhadharo wakareba uye ipfupi, inogona kuvandudza zvinobudirira kunaka kwekurapwa, kukwidziridza ruzivo rwekurapa.
(1) maindasitiri ekudzora inomiririra (2) kuratidza module (3) yekubata skrini (4) bhizinesi kadhi yekudhinda module (5) ID kadhi kuverenga (6) yekurapa kadhi muverengi (7) social security kadhi muverengi (8) voucher printa (9) gwaro rekugashira (10) UnionPay POS muchina (11) simbi yekunyorera
(12) test sheet printer (13) medical rekodhi rekuparadzira (14) invoice printer (15) barcode scanning (16) kamera module (17) nguva switch switch (18) chiratidzo light access control module (19) UPS magetsi (20) simba bhokisi (21) odhiyo (22) yekuchengetedza kabhodhi
1, Multiple mamodheru, zvinoenderana nezvido zvechipatara, kupa software uye Hardware yakagadzirirwa mhinduro.
2, kadhi kadhi yekufaira, kumeso kubvuma bhizinesi kugadzirisa, WeChat, Alipay online kubhadhara, kuchenjera kuchengetedzeka, inoshanda uye nyore.
3. Iyo sisitimu iri nyore uye iri nyore yekutarisa account, iine mabasa akazara senge mushumo kudhinda, transaction ruzivo, query uye kutumira kunze.
4. Real-nguva yekutarisa sisitimu inoshandiswa zviwanikwa uye nehungwaru izwi chiyeuchidzo.
5. Zvichienderana nemamiriro chaiwo echipatara zvakadzama, kubva pakuonekwa kusvika pakuonekera, kubva kumaharaware kusvika pabasa, kuti uwane zvakanyanya zvakagadziriswa.
6. Kuruboshwe uye kurudyi mativi anogona kuwedzerwa zvinoenderana nezviri kudiwa, izvo zvinogona kuona kwevatatu-munhu mashandiro munzvimbo shoma nzvimbo uye nekuwedzera kukwidzirisa mashandisirwo enzvimbo enzvimbo zviwanikwa zvechipatara.
Hot Tags: Medical firimuï¼ŒMedical printerï¼ŒOne-stop bank basa rekurapa, China, vagadziri, vatengesi, fekitori, yakagadzirirwa, mutengo, chitaurwa.
Rusvingo-rwakatasva Yinyitong yekuzvishandira-yega terminal